Global Voices teny Malagasy » Nody Ny Maty, Fotoana Izao Ao Japana Hilanonana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Aogositra 2016 14:56 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina
Minato Mirai Bon Dance (みなとみらい大盆踊り) avy amin'ny mpisera Flickr muratama . Nahazoana alàlana: CC BY-SA 2.0.
Eo amin'ny tapaky ny volana Aogositra isan-taona, mibanjina ny Obon (お 盆) i Japana, ilay Fetin'ny Maty, rehefa mody any an-tranon-drazana ny maty mandritra ny andro maromaro mba hiaraka amin'ny velona. Matetika mitranga ny 15 Aogositra  ny Obon manerana ny toerana maro ao Japana. Tamin'ity 2016 ity, alatsinainy ny 15 Aogositra, ary niaraka tamin'ny andro fety vaovao, ny Fetin'ny Tendrombohitra na ny Mountain Day  , tamin'ny Alakamisy 11 Aogositra, afaka nanao faran'ny herinandro dimy andro ny olona manerana ny firenena. Maro ny fianakaviana no niverina ho any ambanivohitra mba hitandrina (hanatanteraka) ny Obon.
Efa nomanina fatratra ny dihy Bon sasany ao Japana ka mahasarika mpijery an'arivony maro. Ny fetiben'ny Awa Odori  ao amin'ny prefektioran'i Tokushima no tena malaza indrindra amin'ny dihy Bon ao Japana, izay mahasarika raha kely indrindra olona iray tapitrisa isan-taona ao an-tanàna.
Azo jerena ao amin'ny tenirohy Instagram #盆踊り  ny sary betsaka kokoa momba ny dihy Bon
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/19/86914/
 15 Aogositra: https://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
 fetiben'ny Awa Odori: http://tokushimajet.com/awa-odori-advice/